Impendulo eKhawulezayo: Uyikhupha Njani iChloramine Emanzini Ukwenzela Intlanzi-BikeHike
Ikhaya » Zomxube » Impendulo eKhawulezayo: Uyikhupha Njani iChloramine Emanzini Ngeentlanzi
ezaposwa ngomhla Disemba 5, 2021 By danna
Uyisusa njani i-chloramine kumanzi ompompo ngokwemvelo?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ikloramine ibe ngumphunga emanzini etephu?
Ngaba ikloramine iyingozi kwiintlanzi?
Yintoni eyenza i-chloramine ingasebenzi?
Ngaba i-carbon filter iyayisusa i-chloramine?
Ingaba ivithamin C iyisusa njani ikloramine emanzini?
Ngaba ungayenza ibe ngumphunga ikhloramine?
Ngaba ungayisusa ichloramine emanzini empompo ngokubilisa?
Ndingawakhupha njani amanzi ngokukhawuleza?
Ingakanani ikhloramine eyityhefu kwiintlanzi?
Uwenza njani amanzi nge-sodium thiosulphate?
Ngaba i-vitamin C iyayisusa i-chloramine?
Ngaba i-sodium thiosulfate iyayinciphisa ikloramine?
Loluphi uhlobo lwesihluzi esisusa ikloramine?
Ngaba i-osmosis eguqukayo isusa i-chloramines emanzini?
Ihlala ixesha elingakanani i-catalytic carbon?
Izityalo ziyisusa njani iklorine kunye nekloramine emanzini etephu?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuba ivithamin C ithobe iklorini?
Kufuneka ahlale ixesha elingakanani amanzi etafileni ukususa iklorini yentlanzi?
Ngaba amanzi angenisa umoya ayayisusa iklorin?
Kutheni le nto ungaze uphinde uphinde ubuye amanzi?
Ngaba ijusi yelamuni iyanciphisa iklorine?
Eyona ndlela ilula kunye neyona ndlela isebenzayo yokususa iklorine kunye nekloramines emanzini akho kukusebenzisa iikhemikhali ze-dechlorinators. Zininzi iimveliso ezithengiselwa ukusetyenziswa kwe-aquarium ezijolise ngokukodwa ukususa iklorini. I-FritzGuard® kunye neFritz Pro Concentrated Chlorine Remover zimbini kwezi.
Kukho iintlobo ezininzi zokucoca ezisusa iklorine kunye nekloramine kuquka iReverse Osmosis, ukukhanya kweUltraviolet kunye neActiated Carbon. Enye yezona ndlela zisebenzayo zokususa iklorine kunye nekloramine yi-Actiated Carbon.
Uqikelelo lokuba ngumphunga we-1 ppm yeKlorini xa ubilisa iilitha ezili-10 zamanzi ungaphezulu nje kwemizuzu eyi-3.5. Nangona kunjalo, kuyakuthatha malunga nemizuzu engama-60 (iyure enye) ukubilisa ukukhupha yonke iChloramine kumlinganiselo ofanayo wamanzi. Inqaku elibaluleke kakhulu: Iziqulatho zeekhemikhali zamanzi etephu ziyahluka kumazwe ngamazwe kunye namazwe.
Nangona i-chloramines inceda ukwenza amanzi akho akhuseleke ukusela, ayityhefu kwiintlanzi, izirhubuluzi kunye nezilwanyana ezihlala emanzini. Iikloramine kufuneka zikhutshwe emanzini ezi zilwanyana zihlala kuwo. Ngokungafaniyo neklorine yasimahla, iikloramines azichithi ngokukhawuleza emanzini, ngoko kuya kufuneka uthathe amanyathelo ongezelelweyo ukuzisusa.
Iklorini kunye nekloramines zibulala ibhaktheriya ene-nitrifying elungisa i-nitrogen ukusuka emoyeni ukuya emhlabeni. Qaphela: Iitispuni enye ye-humic acid (ulwelo lwe-humate) ingenza i-chloramines ingasebenzi kwiilitha ezili-100 zamanzi ngokuxhomekeke kuxinzelelo oluchanekileyo lwe-chloramines.
Njenge-chlorine, i-chloramine inokususwa kunye nekhaya elipheleleyo okanye indawo yokusetyenziswa kwe-carbon filtration, ukuphumelela kwayo kwanda kunye nenqanaba lokusebenzisa ikhabhoni.
Ngokumalunga ne-2.5 iinxalenye ze-ascorbic acid ezifunekayo ukuze kuthintelwe inxalenye ye-chlorine e-1. Ekubeni i-ascorbic acid ibuthathaka, i-pH yamanzi anyangweyo inokuncipha kancinci kumanzi aphantsi e-alkaline. I-sodium ascorbate nayo iya kunciphisa iklorini. I-pH ingathathi hlangothi kwaye ayiyi kutshintsha i-pH yamanzi acociweyo.
Iikloramine zicotha kakhulu ukusabela. Ngokungafaniyo neklorine, aziphumi emanzini. Kananjalo azisuswanga ngeendlela eziqhelekileyo zokunyanga amanzi. Yiyo loo nto ukufumana isihluzo esinamandla sinokwenza umahluko.
Naku ukuba ukubilisa kuyanceda ekususweni kweChloramine emanzini etephu: Ukubilisa kunyusa isantya sokuphuma komphunga kweChloramine kumanzi etephu kakhulu, kodwa kuseyinkqubo ecothayo ngokwentelekiso. Kuya kufuneka ubilise iilitha ezili-10 zamanzi kangangeyure ubuncinane ukuze ukhuphe ngokupheleleyo i-1 mg/L (imiligram ngeLitha) yeChloramine.
Iindlela ezi-3 eziLula zokukhupha i-chlorine emanzini eTephu Bilisa kwaye uPhole. Okukhona amanzi abanda, kokukhona enegesi eninzi. Ukubonakaliswa kweUV. Shiya amanzi ngaphandle elangeni iiyure ezingama-24 ukuze iklorini ibe ngumphunga ngokwendalo kwinkqubo yokukhupha igesi. Ivithamin C.
Ugxininiso oluncinci njenge. 2-. I-3 ppm ibulala iintlanzi ezininzi ngokukhawuleza. Ukuthintela uxinzelelo, ukugxininiswa okuphantsi njenge-0.003 ppm kunokufuneka.
Yongeza i-4mg ye-sodium thiosulfate nge-50ml yesampuli xa i-chlorine eseleyo ikhona. Gcwalisa zonke iibhotile, uqiniseke ukuba awushiyi amaqamza okanye indawo yentloko. Qokelela iisampulu kwizikhongozeli zeglasi ezingama-250ml. Yongeza i-40 – 50 mg/L ye-sodium sulfite xa intsalela yeklorini ikhona.
I-Ascorbic acid (i-vitamin C) kunye ne-sodium ascorbate inciphisa ngokupheleleyo i-chlorine kunye ne-chloramine, kodwa iyancipha ngosuku okanye ezimbini, ezenza zisebenziseke kuphela kwizicelo zexesha elifutshane.
Eyona ndlela ilula kunye neyona ndlela isebenzayo yokususa i-chlorine kunye ne-chloramines emanzini akho isebenzisa i-dechlorinators yeekhemikhali. Zombini ziquka i-sodium thiosulfate, echaphazela i-chlorine (okanye inxalenye yeklorine ye-chloramine) ukwenza i-ion ye-chloride engenabungozi. I-chlorine isuswe ngokupheleleyo kwaye isuswe ngokupheleleyo.
Iikloramine zezona zingcono zisuswe emanzini ngokucoca i-catalytic carbon filtration. Ikhabhoni yeCatalytic, ikhabhoni esebenzayo enomthamo owongeziweyo wokususa ungcoliseko, yenye yemithombo yeendaba embalwa yokuhluza enokunciphisa ngempumelelo ikloramines kumanzi okusela.
Kwaye, ngokuchaseneyo nenye intsomi ekhuthazwa ngokubanzi, iiyunithi ze-osmosis ezibuyisela umva ziyayisusa i-chloramine. Ngapha koko, bayenza kakuhle, kuba nayiphi na iyunithi ye-RO elungileyo iqulethe izihluzi zekhabhoni ezimbalwa kwaye amanzi afumana ukudlula kancinci kancinci kweyokuqala.
I-carbon media inobomi benkonzo ende, ngokubanzi malunga ne-5 iminyaka. Inokutshintshwa malunga nesiqingatha seyure ngaphandle kolwazi lwemibhobho okanye amava akhethekileyo - nabani na onokuyenza.
Zombini iklorine kunye nekloramine zinokususwa emanzini ngokubilisa. Ukususa isiqingatha sekloramine (isiqingatha sobomi) kuthatha imizuzu engama-30, ngelixa ukwenza okufanayo kwiklorine kuthatha imizuzu emi-2. I-Chlorine nayo iyakuphuma emanzini ngokuyiyeka ihlale, kodwa i-chloramine ayifuni nakweliphi na ixesha elifanelekileyo.
Unokongeza i-1 tsp ye-vitamin C kwi-8oz yamanzi kwibhotile yokutshiza kwaye uyitshize emzimbeni wakho kunye neenwele emva kokushiya i-pool. Emva koko tsiba kwishawari. *esi sitshizi siya kuhlala iiyure ezingama-24 kuphela, iVithamin C ithotywa emanzini ngokukhawuleza kakhulu ukuze ungahlali ixesha elide kakhulu.
Ngokuqhelekileyo, amanzi etephu kufuneka ahlale evulekile malunga neeyure ezingama-24 ukuze yonke i-chlorine iphele kuyo.
I-Chlorine iyaguquguquka kwaye iya kutshabalalisa ngokwemvelo kumachibi avulekileyo, kodwa i-aeration iya kukhawulezisa inkqubo kakhulu. I-aeration ayisebenzi kwi-chloramine, nangona kunjalo, isongezo esingaguquguqukiyo esisetyenziswa ngabasemagunyeni bamanzi kamasipala. Kuya kufuneka wongeze i-agent ye-dechlorination ngokunjalo.
UMngcipheko oPhambili waManzi aphinde wabiliswa kwakhona amanzi akhupha iigesi ezinyityilisiweyo emanzini, oko kuwenza abe “caba.” Ubushushu obugqithisileyo bunokwenzeka, okwenza amanzi ashushu ngakumbi kunendawo yawo yokubilisa yesiqhelo kwaye abangele ukuba abile ngokuqhushumba xa ephazamisekile. Ngenxa yesi sizathu, luluvo olubi ukubilisa kwakhona amanzi kwi-microwave.
I-Chlorine sisiqalelo sekhemikhali esisetyenziswa njengesibulali-ntsholongwane xa sigalelwa emanzini okusela. Yongeza iilayiti ezimbalwa zelamuni kwingqayi yakho yamanzi (okanye amathontsi ambalwa ejusi yelamuni ecocekileyo) ukunceda ukuthoba iklorini. I-Lemons kunye ne-limes zinika umthombo ogxininisiweyo we-vitamin C, oye waboniswa ukuba uchithe okanye unciphise i-chlorine.
Umbuzo: Uyikhupha Njani iKlorini Emanzini Ukwenzela Iintlanzi
Indlela yokusebenzisa iklorini yamanzi kwiTanki yeentlanzi
Umbuzo: Zinokuhlala ixesha elingakanani iintlanzi kuManzi eChlorine
Umbuzo: Ixesha elingakanani iklorini iphuphuma kumanzi etephu eentlanzi
Ngaba Inja Iza Kusela Amanzi eChlorine
Impendulo eKhawulezayo: Inokuhlala ixesha elingakanani intlanzi kuManzi eChlorine
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi eChlorine Alungile kwizinja
Mangakanani Amanzi Aza Kuwasusa KwiTanki Yeentlanzi
Indlela yokukhupha amanzi alukhuni kwiTanki yeentlanzi
Indlela yokususa umgca waManzi kwiTanki yeentlanzi ezisetyenzisiweyo
Ngaba Amanzi eChlorine Alungile Kwizinja Zezinja
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba i-Chlorine Pool Amanzi Alungile kwizinja
Post Previous: Umbuzo: Kufuneka Afudumele Kangakanani Amanzi Kwintlanzi yeBetta
Okulandelayo Post: Impendulo eKhawulezayo: Ngaba Amanzi Adityanisiweyo Alungile Kwintlanzi yeBetta